Shiinaha Warshadda jilicsan ee PVC Cable Winders warshad iyo soosaarayaasha | SJJ
Qaboojiyaha Cable -ga PVC ee jilicsan ayaa waxtar kuu leh marka aad telefoonka gacanta ku shubanayso ama aad nadiifinayso gurigaaga. Had iyo jeer waxaa sameeya haysta PVC jilicsan oo leh silig bir ah oo ku dhegan si loo hagaajiyo fiilooyinka. Waxaan haynaa qaabab badan oo jira oo leh qaabab iyo midabbo qurux badan oo ku jira 2D ama 3D, oo astaamahaaga lagu daabici karo ama lagu xardhi karo ...
Qaboojiyaha Cable -ga PVC ee jilicsan ayaa waxtar kuu leh marka aad telefoonka gacanta ku shubanayso ama aad nadiifinayso gurigaaga. Had iyo jeer waxaa sameeya haysta PVC jilicsan oo leh silig bir ah oo ku dhegan si loo hagaajiyo fiilooyinka. Waxaan haynaa qaabab badan oo jira oo leh qaabab iyo midabbo qurux badan oo ku jira 2D ama 3D, kuwaas oo astaamahaaga lagu daabici karo ama lagu xardhi karo dhinacyada hore ama gadaal ee jiilaalka fiilooyinka. Naqshadayaashu waxay ka dhigaan Winders Cable PVC -ga jilicsan kaliya maahan mid fudud oo fudud, laakiin sidoo kale waxay siiyaan qaababka waxyaabo badan waxayna ka dhigaan Winders Cable Winders Cable mid qurux badan oo soo jiidasho leh.
Winders Cable PVC ee jilicsan ma aha oo kaliya aaladda hagaajinta qolkaaga laakiin sidoo kale qurxinta si aad u labisato adduunkaaga. Calaamadahaaga waxaa lagu soo dhaweynayaa jilayaasha cusub si ay u sharxaan fikradahaaga iyo fikradahaaga. Markaad baxdo, Qaboojiyaha Qaboojiyaha ah ee jilicsan ee PVC way fududahay in la qaado si loogu isticmaalo dibadda. Muunadaha waxay diyaar noqon doonaan 7 maalmood gudahood waxayna soo saari doonaan qiyaastii 15 ~ 20 maalmood. Lacagta caaryada ah waa u bilaash alaabta jirta, caaryada yaryarna waxay ku dallacdaa naqshadaha cusub. Waa fikrad aad u fiican in la isticmaalo Jilibyada Qaboojiyaha ee Qaboojiyaha ah ee PVC -ga ah iyo kuwa haysta marka aad hagaajinayso qolalkaaga, ama aad nadiifiso boorsooyinkaaga si aad uga fogaato wax khalkhal ah.
Dhammaystirka: Dhammaan noocyada kala duwan ee qaababka, Logos waa la daabici karaa, waa la xardhi karaa, Laser waa la xardhay oo sidaas maya
Ikhtiyaarrada Lifaaqa Caadiga ah: Siligga birta ayaa ku dhegan iyo kuwa kale
Hore: Silsilado gacmeedyo iyo jijimooyin PVC ah oo jilicsan
Xiga: Coasters -ka jilicsan ee PVC
Gacan -ku -samaynta Furayaasha Rinjiga